Olee otú VRO ka MPEG ọsọ ọsọ na mfe
> Resource> Video> Olee otú iji VRO ka MPEG
Olee otú VRO ka MPEG
VRO bụ a video format na DVD ndekọ iji ndekọ video. Ebe ọ bụ na VRO faịlụ ndị ike na-egwu ma ọ bụ dezie, ọtụtụ ọrụ gụnyere i nwere ike iji tọghata VRO ka MPEG maka ihe adaba playback ma ọ bụ edezi. Ị nwere ike iji Wondershare Video Ntụgharị dị ka gị pụrụ ịdabere na VRO ka MPEG Ntụgharị. Ọ bụghị nanị na-enyere gị aka tọghata gị VRO ndekọ faịlụ ka MPEG usoro (MPEG-1, MPEG-2, na MPEG-4 gụnyere), ma-enye gị ohere kpọmkwem dezie VRO faịlụ na nza nke kemfe video eiting ngwaọrụ, dị ka cropping, ọnwụ, n'usoro n'usoro, merging, na-agbakwunye dị iche iche jụụ effeccts na ndabere music, sobtaitel wdg Site n'ụzọ, uku a omume nwekwara nwere ikike ka ị na-egwu VRO faịlụ na kasị ewu ewu na ngwaọrụ effortlessly.
Ọzọ, Aga m tumadi-akụziri gị otú tọghata VRO ka MPEG maka ojiji. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmara banyere ndị ọzọ ọrụ arụmọrụ, ị nwere ike pịa ebe a. Ugbu a, dị nnọọ ibudata, wụnye na ẹkedori uku a VRO ka MPEG video Ntụgharị, na mgbe ahụ na-eso nduzi n'okpuru.
1 Tinye VRO videos ka VRO ka MPEG Ntụgharị
Mbụ, echekwa gị VRO faịlụ na PC. Ọ bụrụ na ha na-ama na kọmputa gị, dị nnọọ emeghe nchekwa ebe ha na-azọpụta. Họrọ VRO faịlụ na ị chọrọ, mgbe ahụ, ịdọrọ ha si nchekwa a usoro si ebi ndụ. Alternatively, akpali gị òké pịa "Tinye Files" button aka ịchọta ndị lekwasịrị faịlụ na mbubata ha. Ugbu a, ị pụrụ ịhụ na ha ga-egosi na ekpe item tree dị ka thumbnails.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị na-achọ iji tọghata faịlụ niile n'ime nnukwu faịlụ, i kwesịrị ego igbe bụ "jikota niile videos n'ime otu faịlụ" n'oge ahụ.
2 Họrọ MPEG dị ka mmepụta format
I nwere abụọ ụzọ dị iche iche na-emeghe a ngwa si mmepụta format window. Bugharịa gị òké na "mmepụta Format" ebi ndụ nke a usoro, wee pịa ndọpụta ndepụta ma ọ bụ usoro image akara ngosi. Na-esonụ mmepụta format window, ị nwere ike ịga na "Format" Atiya na mgbe ahụ "Video" subcategory. Ugbu a, ị pụrụ ịhụ MPEG-1, MPEG-2, na MPEG-4 (ie MP4 Video) ebe a. Dị nnọọ họrọ otu dị ka gị mkpa.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị họrọ ụfọdụ ngwaọrụ dị ka mmepụta format, ọ pụtara a ngwa ga-tọghata gị faịlụ dabara ngwaọrụ. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike igwu gị faịlụ na ngwaọrụ enweghị ihe ọ bụla na-emegide nke.
3 Dezie gị video faịlụ (Nhọrọ)
Ọ bụrụ na ị pịa "Dezie" ke menu mmanya, ị ga-aba n'ime ya edezi window. Ebe a, ị nwere ike nweta ihe ọ bụla clip nke video, enlarge ọ bụla nke ebe video, tinye ọkacha mmasị gị ndabere music, tinye jụụ mmetụta na video, na ndị ọzọ.
4 Malite VRO ka MPEG akakabarede
See "tọghata" button ịrụ VRO ka MPEG akakabarede. Ozugbo, a na ngwa ga-amalite converting gị faịlụ na akakabarede ọganihu mmanya Ile. N'oge akakabarede, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ime ndị ọzọ ọrụ n'otu oge, ị dị nnọọ ka ọ na-agba ọsọ na ndabere.
Mgbe akakabarede, akpali gị òké ka Meghee nchekwa na pịa nhọrọ. Ị nwere ike ịchọta converted faịlụ n'ebe ahụ.
Olee otú iji tọghata VRO ka AVI
Olee otú iji tọghata DVR ka MPEG
Olee otú iji tọghata DVR ka AVI
Top Iri Songs na Famous 3D Movies
Oge Lapse Software: Mepụta Time Lapse Video
Olee otú Tinye Audio Adalata na Mmetụta
Olee otú Download Beatport Songs maka Free Iji Beatport Downloader Online
Video Editor Maka Windows 8: Dezie ma hazie Videos
Olee otú Bee VOB Files na Top 10 VOB egbutusị
Olee otú Bee MKV Files (Windows 10 gụnyere)